AVAST ANAGHỊ AMALITE: AKPATA NA NGWỌTA - AVAST - 2019
A ghaghị ile usoro nke Avast anya dị ka otu n'ime ihe kacha mma ma ọ bụ nke kacha mma. Ka o sina dị, nsogbu na-erukwa na ọrụ ya. Enwere ikpe mgbe ngwa ahụ adịghị amalite. Ka anyị chọpụta otu esi edozi nsogbu a.
Gbanyụọ ákwà nchedo
Otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa mere nchebe nke nje Avast anaghị amalite bụ iji gbanyụọ otu ma ọ bụ karịa nhazi nke usoro ihe omume ahụ. Enwere ike ịpụpụ ya site na ịpị ihe mberede, ma ọ bụ mmejọ nke usoro. Ọzọkwa, enwere ikpe mgbe onye ọrụ ahụ agbanyụchapụrụ onwe ya, dịka mgbe ụfọdụ, ụfọdụ mmemme chọrọ nke a mgbe ha debere, wee chefuo ya.
Ọ bụrụ na mgbanaka nchedo ahụ adịghị mma, obe dị ọcha na-acha uhie uhie na-egosi na akara Avast na tray.
Iji dozie nsogbu ahụ, jiri aka nri pịa akara ngosi Avast na tray. Na menu nke gosipụtara, họrọ ihe "Njikwa ihuenyo avast", wee pịa bọtịnụ "Kwado niile ngebichi".
Mgbe nke ahụ gasịrị, nchekwa ga-agbanye, nke ga-egosi site na efunahụ cross site na akara Avast na tray.
Otu n'ime ihe ịrịba ama nke mwakpo nje na kọmputa nwere ike ịbụ enweghị ike ime ka nje nje na ya, gụnyere Avast. Nke a bụ mmeghachi omume nchebe nke ngwa nje ndị na-achọ iji chebe onwe ha pụọ ​​na mwepụ antivirus.
Na nke a, ọ bụla antivirus arụnyere na kọmputa na-abaghị uru. Iji chọpụta ma wepu nje, ịkwesịrị iji ojiji nke na-adịghị achọ ntinye, dịka ọmụmaatụ, Dr.Web CureIt.
Ka mma, kpuchie ike mbanye gị site na ngwaọrụ ọzọ na-adịghị emerụ ahụ. Mgbe ịchọta na wepụ nje ahụ, Avast Antivirus kwesịrị ịmalite.
Nnukwu aka na Avast
N'ezie, nsogbu dị na ọrụ antivirus Avast na-eme nnọọ obere, mana, ọ bụ n'ihi mmeri nje, ike ọdịda, ma ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa kpatara, ọrụ ahụ nwere ike mebie emebi. Ya mere, ọ bụrụ na ngwọta abụọ mbụ anyị kọwapụtara enyeghị aka idozi nsogbu ahụ, ma ọ bụ akara ngosi Avast apụtaghị ọbụna na tray, mgbe ahụ ihe ngwọta kachasị mma bụ iji weghachite usoro antivirus ahụ.
Iji mee nke a, ị ga-ebu ụzọ mezue mwepu kpamkpam nke Avast Antivirus, mechie ndekọ ahụ.
Mgbe ahụ, anyị na-arụ ọrụ Avast na kọmputa ọzọ. Mgbe nke ahụ gasịrị, nsogbu na-agba ọsọ, n'ọtụtụ ọnọdụ, na-efu.
Na, n'ezie, echefukwala iṅomi kọmputa gị maka nje.
Ihe ọzọ kpatara antivirus nwere ike ghara ịmalite bụ arụmọrụ sistemụ. Nke a abụghị nke kachasị, ma nsogbu kachasị mgbagwoju anya na ntinye nke Avast, njedebe nke dabere na ihe kpatara ya, na ịdị omimi nke ọnya os.
Ọtụtụ mgbe, ọ ka na-achọ ka a kpochapụ ya site na ịgagharị usoro ahụ na nkwụghachi oge, mgbe ọ ka na-arụ ọrụ ọ bụla. Ma, n'ọnọdụ ndị siri ike, a chọrọ ntinyeghachi osụhọ nke os, ọbụnadị ngbanwe nke ihe ngwaike kọmputa.
Dịka ị nwere ike ịhụ, ogo nke isi ike iji dozie nsogbu na enweghị ike ịgba ọsọ antivirus Avast, nke mbụ, dabere na ihe kpatara ya, nke nwere ike ịdị iche iche. A na-ekpochapụ ụfọdụ n'ime ha site na ntanetị nke abụọ, na iji kpochapụ ndị ọzọ, ị ga-ehichapụ nke ọma.
https://termotools.com ig.termotools.com © Avast 2019